टेलको पीछा गर्दै: ह्यारी पॉटर र दिगो टेल | Martech Zone
टेलको पीछा गर्दै: ह्यारी पॉटर र दिगो टेल
शनिबार मेरो नियमित स्टपको साथ सुरू हुन्छ किनाराहरू। मैले आदेश दिए गुगल नक्शा ह्याक्स अमेजन बन्द छ त्यसैले म यस हप्तामा रिजोर्टपबका लागि केहि थकित मानचित्रण इन्टरफेसहरूमा काम गर्न सक्दछु। मैले २-दिन शिपिंग अर्डर गरें तर पुस्तक आइपुगेन… यसलाई कोलम्बस, OH मा ट्र्याक गरियो। मलाई लाग्छ यो पहिलो पटक हो कि मैले अमेजनबाट समयमै मेरो अर्डर प्राप्त गरेको छैन - आशा गर्छु कि यो फेरि नहोस्।
मेरो बिन्दुमा फर्कनुहोस् ... म बोर्डरमा छु र म यो किताब देख्छु यदि ह्यारी पॉटर सामान्य इलेक्ट्रिक चलायो। म अहिले पढ्दै छु लामो लेल र यसले एउटा अचम्मको अवधारणालाई बोल्दछ जुन कम्प्युटर, इन्टरनेट र टेक्नोलोजीमा टेक्नोलोजीको प्रगतिले शीर्ष पर्सेन्टाइलमा नभएका उत्पादनहरूको बिक्री चलाउँदैछ। यो एक महान पुस्तक हो। भर्खर पढिएको फ्रिकोनोमिक्स, यो उत्तम प्रशंसा हो।
मैले शीर्षकलाई हेरेँ यदि ह्यारी पॉटर सामान्य इलेक्ट्रिक चलायो, म मद्दत गर्न सक्दिन तर यो चाखलाग्दो कुरा पत्ता लगाउन सकें कि लेखक टम मोरिस, जबकि राम्रो समीक्षाको साथ स्थापित लेखकले ह्यारी पॉटरको सफलताको प्रयोग गर्दै आफ्नो पुस्तक 'टेल टेल' लाई अगाडि बढाए। अमेजनका लागि आगन्तुक जो खोजी गर्छन् Harry Potter यो खोज # at० मा उनीहरूको खोज परिणामहरूमा फेला पार्नेछ। ह्यारी पॉटर सबै समयका पुस्तकहरूको सब भन्दा सफल श्रृंखला हुन सक्छ। बच्चाहरू र अभिभावकहरू एक साथ लाइनमा उभिन्छन् र अर्को पुस्तकको लागि भोकाउँछन्। उनीहरूले अमेजनलाई बुझ्ने बित्तिकै, म मद्दत गर्न सक्दिन तर आश्चर्यचकित भए कि कति हजारौंले यो पुस्तक खरीद गरे।
म पनि उत्सुक छु यदि यो श्री मोरिस र उसको प्रकाशकको ​​जानाजानी मार्केटिंग रणनीति थियो भने! समग्रमा, उनको पुस्तक अमेजनमा #, 66,951 154,295 १ मा मूल्या is्कन गरिएको छ जबकि उहाँको अन्तिम पुस्तक # १3,२। Is हो। के टम मोरिस गत years बर्षमा मात्र राम्रो लेखक बन्न पुगे? वा उसको पुस्तकले ह्यारी पॉटरलाई पछ्यायो र उसलाई लामो दिगो बनायो?
Robert Scoble & Shel Israel बोले यस प्रवृत्तिको साथ हुने बारे नग्न कुराकानीहरू। यो सोच्न रोचक छ कि यो रणनीतिको रूपमा उपयोग हुन सक्छ, यद्यपि!
इंडियानापोलिस स्टार फोटोजोर्लिष्ट मोपोजी टोलबर्टको मृत्यु पछि अनुसन्धान गरियो
अगस्ट 3, 2006 मा 9: 41 AM
नमस्ते डगलस! यो किताब याद गर्नुभएकोमा धन्यवाद! मैले करीव3वा ago बर्ष भन्दा पहिले कुनै ह्यारी पॉटर कथाहरू पढेका थिएनन्, एक युवा दार्शनिकले मलाई बोलाए जुन उनले सम्पादन गर्न लागेका पुस्तकको लागि निबन्ध लेख्न आग्रह गरे - ह्यारी पॉटर एण्ड फिलॉसफी। मसँग यस परियोजनामा ​​जानको लागि समय थिएन, र मलाई कुनै झुकाव पनि लागेन, तर उहाँ मेरो मनपर्ने पीएचडी विद्यार्थीको विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो, त्यसैले उहाँ र उनका शिक्षकलाई अनुग्रहको रूपमा, जसलाई उनले यस फोनको बारेमा मलाई बोलाउने काममा भाग लिएका थिए। प्रोजेक्ट, म कमसेकम पहिलो कुम्हार पुस्तक हेर्न म सहमत भएँ। म तत्काल हुकिएको थियो, र ती सबै पढ्नुहोस् times पटक प्रत्येक! मैले युवा प्राध्यापकको पुस्तकका लागि निबन्ध लेखें र त्यसपछि लेख्न रोक्न सकेन। जीवन र नेतृत्व को बारे मा यति धेरै आश्चर्यजनक अन्तर्दृष्टिहरू थिए जुन यति लोकप्रिय कथाहरूमा कसैले पनि कुरा गरिरहेको थिएन। धेरै चाँडै मसँग page०० पृष्ठ थियो - एउटा पुस्तक! यसलाई "ह्यारी पॉटर र जीवनको अर्थ" भनिन्थ्यो तर शीर्ष व्यवसाय सम्पादक, मेरो एजेन्टको साथी, यो समात्यो, नेतृत्व नेतृत्वको स्तर देख्यो, र मलाई सोधे कि म यसलाई पुस्तकमा परिणत गर्न सक्छु कि भनेर एक जीवन गाइड को रूप मा अधिक एक व्यापार पुस्तक हुनेछ। म सुरुमा शंकास्पद थियो, तर पुन: पढ्दा यो विश्वस्त भयो।
दर्शन विभागमा १re वर्षको नोट्रे डेममा शिक्षा दिए पछि म अब देश भरका ठूला व्यवसाय समूहहरूसँग कुरा गर्छु। Doubleday सम्पादकलाई थाहा थियो कि मेरो व्यवसायको शीर्षकले मेरो दर्शकलाई अपील गर्दछ। उनले भने, "Doubleday मा सबैले तपाइँको १ 15 1997 book को पुस्तक मनपराउँदछन् यदि एरिस्टोटल रान जनरल मोटर्स र त्यस्तै मलाई थाहा हुने प्रत्येक सीईओ, त्यसो भए के तपाइँ समानान्तर शीर्षक गर्न तयार हुनुहुन्छ?" मैले धेरै अनुसन्धान गरे र डबलडे पनि गरे, र हामी सहमत भए यदि ह्यारी पॉटर रान जनरल इलेक्ट्रिक जाने मनोरञ्जनात्मक तरिकाको रूपमा।
कम्पनीहरूले हजारौं प्रतिलिपिहरूको अर्डर गरेको छ, मुख्य कार्यकारी अधिकारीहरूले यसलाई उठाए र त्यसपछि आफ्ना सबै रिपोर्टहरू र कार्यान्वयनको लागि खरीद गरे, र अब हेरी पॉटर फेन्डमले यसलाई पत्ता लगायो। त्यसैले बेस्टसेलर सूचीहरू हिट गर्ने यो 97 since पछि मेरो पहिलो पुस्तक हो (यस गर्मी द वाल स्ट्रिट जर्नल, सीईओ रिड, बुकजेभ)।
यो एक चाखलाग्दो मार्केटिंग उपकरण हो - एक शीर्षक जुन वर्णनात्मक, उत्तेजक, जटिल, रमाईलो छ, र त्यो दुई धेरै फरक पुस्तक किनमेल सार्वजनिक गर्न अपील गर्दछ।
र - वैसे - मलाई लाग्छ कि मैले लेख्ने प्रत्येक पुस्तक मैले गरेको सब भन्दा राम्रो हो, तर वर्षौंपछि म ती सबैलाई बच्चाहरूलाई जस्तै समान प्रेम गर्छु।
याद गर्नुभएकोमा धन्यवाद !!!!!
जुन 4, 2007 मा 11: 11 PM
यो हेरी पॉटर लेख मनपरायो। के तपाईले हैरी पॉटर फोरम जाँच गर्नु भएको पहिलो स्थान हो जुन पछिल्लो हैरी पॉटर चलचित्र, हेरी पॉटर र फिनिक्सको अर्डरको बारेमा खबर पोष्ट गर्दछ।